Kobo Plus စျေးကွက်ထဲတွင် ebook အသစ်စျေးနှုန်းသစ်တစ်ခု | eReaders အားလုံး
နှစ်နှင့်ချီ။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီများနှင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများမှအလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသော ebooks နှုန်းထားများကိုအမှန်တကယ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ အားလုံး Spotify ၏စီးပွားရေးမော်ဒယ်ကိုအောက်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်တွင် ebooks များအတွက်နှုန်းထားများမှာလျော့နည်းသွားသော်လည်းအလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကိုဖန်တီးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏နောက်ဆုံးကိုခေါ်သည် Kobo Plus အား.
Kobo Plus သည် ebooks များငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ Kobo Rakuten ထံမှ Ebooks များအတွက် Flat Rate အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော streaming ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအနည်းငယ်ကမ်းလှမ်းသည် တစ်လလျှင်ယူရို ၁၀ ဒေါ်လာအောက် ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့တွင်သာရရှိနိုင်သည်။
Kobo Plus တွင်သေးငယ်သော်လည်းအရည်အသွေးရှိသောကတ်တလောက်ရှိသည်
Kobo Rakuten ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်သည်အရည်အသွေးထက်ပိုမိုသောအရည်အသွေးကိုနှစ်သက်သော ebook ချစ်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါကြောင့် Kobo Plus ကတ်တလောက်သေးသေးလေးပဲ။ Kobo Plus တွင် ၄၀,၀၀၀ သာရှိပြီး ၁၆,၀၀၀ သာဒတ်ခ်ျဘာသာစကားဖြင့်ရှိသည်။ Kobo Rakuten သည်နိုင်ငံများ၏စာရေးသူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများနှင့်သဘောတူညီမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးထိုနိုင်ငံများ၏စျေးကွက်၏ ebooks များကိုတဖြည်းဖြည်းထည့်သွင်းရန်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိချိန်တွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
Kindle Unlimited နှင့်မတူဘဲ Kobo Plus သည်ဖြန့်ဝေလိမ့်မည် စာရေးသူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများနှင့်အမြတ်အစွန်းများရရှိကြသည်အမေဇုံဝန်ဆောင်မှုတွင်မဖြစ်ပျက်သောအရာ။ Kobo eReaders သည် ၀ ဘ်ဘရောက်ဆာမှတစ်ဆင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုက်ရိုက်သုံးရန်ခွင့်ပြုမည့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုရရှိလိမ့်မည်။
ကျန်ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင် Kobo Plus ကကမ်းလှမ်းသည် ရက် ၃၀ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် Writing Life ၀ န်ဆောင်မှုကိုရေးသားသူများသည်ဆန္ဒရှိပါက၎င်းတို့၏ ebooks များရနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်ကျန်နိုင်ငံများသို့မည်သည့်အချိန်၌ရောက်ရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သို့သော်ဥရောပနိုင်ငံများ၌ရှိနှင့်ပါကစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရန်ကြာမြင့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Kobo Plus သည် Kindle Unlimited ထက်စျေးနှုန်းချိုသာမှုရှိပါသလား။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » စျေးကွက်ရှိ ebooks များအတွက်စျေးနှုန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Kobo Plus
ငါတွေးမိတာက Amazon နှင့် Kobo သည်တစ်နေ့ကျရင် subscription service အတွက်ထောက်ပံ့ထားသော ereaders များကမ်းလှမ်းမလားဆိုတာပါ။ ရှင်းပြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Kindle ကိုယူရို ၁၀ (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာ) မဆိုအကန့်အသတ်မရှိရွေးစရာပါ ၀ င်ပြီးပုံမှန်ဖုန်းနံပါတ်တွင်မဖြစ်မနေနေထိုင်ရမည့်အချိန်ရှိပါသလား။
ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ အမေဇုံကိုယူအက်စ်အေမှာလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုတာငါဘယ်မှာငါတွေးမိလဲမသိဘူး။